छोरा र श्रीमतीको मायानै लाग्दैन ,अर्काको बुढी भगाएको छु त्यहि संग खुसि छु ….(भिडियो हेर्नुस्) – Taja Khawar
छोरा र श्रीमतीको मायानै लाग्दैन ,अर्काको बुढी भगाएको छु त्यहि संग खुसि छु ….(भिडियो हेर्नुस्)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख २४, २०७८ समय: ११:५०:१८
झापाको डुनाबारी बस्ने कालिका कतिवडा अहिले २१ बर्षकि भईन। उनको १७ बर्षमा बिहे भएपछि उनको अहिले एक सन्तान छोरा पनि जन्मेको छ। १७ बर्षमा बिबाह गरेकी कालिका को कोखबाट जब छोराको जन्म भयो त्यसपछि उनि हेला हुन थालिन। उनले आफ्नो पिडा कसैलाई भनिनन , नभनेपछि उनका श्रीमानले अर्काको बुढी भगाएका छन्। श्रीमानले अर्काको बुढी भगाएपछि सम्पर्क बिहिन भएपछि कालिका श्रीमानको खोजि गर्दै मिडिया सामु आएकी थिइन्।
मिडिया मा आएर आफ्नो पिडाहरु सबै सुनाएपछि उनका श्रीमान अहिले सम्पर्कमा आएका छन्। अहिलेको भेटमा श्रीमानश्रीमतीले कुरा गर्दा उनका श्रीमानले भने मैले त संग बिबाह गरेर धेरै पछुताएको छु र अर्काको बुढीसंग बिबाह गरेर धेरै खुसि छु। घरको सल्लाह अनुसार बाजा बजाएरै बिबाह गरेको हो , म मन परेको थिएन भने किन मन पर्छ भनि बिबाह गरेको हो भनि श्रीमतीले श्रीमानलाई प्रश्न गर्दा पहिले मन परेको थियो अहिले परेन भनि जवाफ दिए।
श्रीमती कालिका भन्छिन म कुनै नराम्रो बाटो हिनेको थिएन , मलाई बुबा आमाले जस्तो घरमा दिनु भएको थियो त्यो समालेर म बसे २ बर्ष सम्म छोरा लाई धेरै दुख गरेर हुर्काएको छु। मलाई अब पुरै मेरो अधिकार चाहियो भनेकी छिन। यदि मेरो कुनै कमिकमजोरी थियो भने भनेको भए म सुधारथे त्यसरी अर्काको श्रीमती लगेर मलाई बिच्चली बनाउने श्रीमानसंग म कहिले बस्न सक्दिन भनि कालिकाले भनेकी छिन्।
कालिकाको श्रीमान भन्छन मलाई पहिलो श्रीमती छोड्नुमा कुनै पछुतो छैन। म अहिलेको श्रीमती संग खुसि छु , मलाई पहिलो श्रीमतीको र छोराको माया नै लाग्दैन।
Last Updated on: May 7th, 2021 at 11:50 am